डोमिनोज्स 🥇 प्रविष्ट गर्नुहोस् र emulator.online बाट आनन्द लिनुहोस्
डोमिनोज्स। डोमिनोजको खेल धेरै छ विश्व भर मा प्रसिद्ध र हजारौं व्यक्ति द्वारा खेलाइएको। पारिवारिक जमघटमा, साथीहरूको सर्कल, पार्टीहरू, बार्बेक्युहरू, सप्ताहन्तमा आदि ...
यो सम्भवतः सबैभन्दा पुरानो खेलहरू मध्ये एक हो जसको लागि सन्दर्भहरू छन्।
डोमिनोजहरू: कसरी स्टेप बाय स्टेप खेल्ने
डोमिनोज भनेको के हो? 🙂
डोमिनो एक बोर्ड खेल हो कि प्रयोग गर्दछ आयताकार आकारका टुक्राहरू, सामान्यतया एक मोटाई संग धनी कि तिनीहरूलाई दिन्छ समानान्तरको आकार, जसमा एउटा अनुहार संख्यात्मक मानहरू संकेत गर्दै थोप्ला द्वारा चिह्नित हुन्छ।
यो शब्द व्यक्तिगत रूपमा टुक्राहरू पनि डिजाइन गर्न प्रयोग गर्दछ जुन यस खेलको बनाउँदछ। नाम सम्भवतः ल्याटिन अभिव्यक्तिबाट आएको हो "नि: शुल्क डोमिनो" ("प्रभुलाई धन्यबाद"), युरोपेली पादरीहरूले म्याचमा जीतलाई चिन्हित गर्न भनेका थिए।
खेलाडीहरूको संख्या: 4
टुक्रा: ० देखि 28 सम्मका पक्षहरूसहित २ pieces टुक्रा।
टुक्रा प्रति प्रति सहभागी: प्रत्येक सहभागीका लागि pieces टुक्रा।
खेलको उद्देश्य: points० बिन्दु बनाउनुहोस्।
डोमिनो टुक्रा: यो दुई टुक्राहरू मिलेर बनेको टुक्राहरू हो, प्रत्येकसँग नम्बरहरू (टुक्राहरूको उदाहरण: २--2, 5-6, ०-१)।
कसरी टुक्राहरू राख्ने?: जब टुक्रा अर्कोको छेउमा राखिन्छ जसमा कम्तिमा एउटा संख्या समान हुन्छ (उदाहरण: २--2 मिल्दो 5--5)।
पालो पार गर्दै: जब खेलाडी संग एक टुक्रा छैन कि अन्त फिट।
खेल अवरुद्ध: जब दुबै खेलाडीसँग टुक्राहरू हुँदैन जुन प्रत्येक अन्तमा फिट हुन्छ।
खेल कसले जित्यो?: जब खेलाडीहरू मध्ये एक उनको हातमा टुक्राहरू रन आउट गर्न प्रबन्ध गर्दछ, सबै फिट गरेर।
डोमिनोज कसरी खेल्ने?🁰
टुक्राहरू टेबलमा "फेरबदल" हुन्छन्, र प्रत्येक खेलाडीले लिन्छन् Pieces टुक्रा खेल्न। खेलाडी जसले खेल सुरु गर्दछ उही एक हो टुक्रा 🂓-🂓🂓 छ। यो टुक्रालाई टेबलको बिचमा राखेर खेल सुरू गर्नुहोस्। त्यहा बाट, काउन्टर-क्लक्वाइज बजाउनुहोस्.
प्रत्येक खेलाडीले खेलको अन्त्यमा उनीहरूको केही टुक्राहरू फिट गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ, एक पटकमा। जब एक खेलाडी एक टुक्रा फिट गर्न को प्रबंधन, पालो अर्को खेलाडीमा पारित गरियो। यदि खेलाडी संग एक टुक्रा छैन कि दुवै पक्ष फिट, पालो पास गर्नु पर्छकुनै पनि टुक्राहरू बिना खेल्दै।
El खेल अन्त्य हुन सक्छ दुई परिस्थितिमा: जब एक खेलाडीले खेल हराउन, वा खेल लक भएको बेला। यस पटकको पहिलो खेलाडी अघिल्लो खेलबाट पहिलो खेलाडीको दायाँ खेलाडी हुनेछ।
यदि कुनै खेलाडीले खेल जितेको छ: तपाईंको टोलीले टुक्राहरूबाट सबै बिन्दुहरू लिन्छ जुन विपक्षीहरूको हातमा हुन्छ।
यदि खेल लक छ: प्रत्येक जोडी द्वारा प्राप्त सबै पोइन्टहरू गणना गरिन्छ।
थोरै बिन्दुहरूको साथ जोडी विजेता हो, र विरोधी जोडीका सबै पोइन्टहरू लिन्छ। यदि त्यहाँ यो बिन्दु गणनामा टाई छ, जोडी जोडी अवरोध जोडी खेल हराउँछ र विजयी जोडी यस जोडी बाट सबै अंक लिन्छ। विजेता जोडी को पोइन्टहरू संचित हुन्छन् र खेल समाप्त हुन्छ जब जोडी मध्ये एक point० अ point्कको अंकमा पुग्छ।
प्रत्येक टुक्राको बिन्दु मान दुई टुक्राको मानको योगसँग मिल्छ। तसर्थ, टुक्रा ०-० लाई ० बिन्दुको मान छ, टुक्रा 0-0-। मूल्य0अंकको छ, टुक्रा 3-4 को मूल्य १२ बिन्दुको मूल्य हो, र यस्तै।
खेलका चार सहभागीहरू छन्, जसले दुई जोडी बनाउँछन्, र तिनीहरू वैकल्पिक स्थितिमा बस्नुपर्दछ।
सब भन्दा स्वीकार्य सिद्धान्त यो हो कि यो चीनमा २ 243 देखि १181१ ईसा पूर्व देखा पर्नेछ , हंग मिing नाम गरेको सिपाहीले बनाएको।
त्यस समयमा, टुक्राहरू कार्ड खेल्नेसँग धेरै मिल्दोजुल्दो थिए, अर्को देशको आविष्कार, र तिनीहरूलाई पनि भनिन्थ्यो "बिंदीदार अक्षर" .
पश्चिममा, १om औं शताब्दीको मध्यसम्म डोमिनोजको रेकर्ड छैन, जब यो भित्र देखा पर्‍यो फ्रान्स र इटालीअधिक अदालतको अदालतमा भेनिस र नेपल्स, जहाँ खेल एक शौकको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो।
अर्को स्टप इ England्गल्यान्ड भएको देखिन्छ, द्वारा प्रस्तुत गरिएको १ French औं शताब्दीको अन्तमा फ्रान्सेली कैदीहरू।
त्यस बेलादेखि यो हाम्रो कल्पना र इतिहासको आधारभूत ज्ञानमा निर्भर गर्दछ, तर हामी केवल आप्रवासीहरूलाई धन्यवाद दिन सक्छौं, स्वागत वा नहोस्, जसले खेललाई स्पेनी मुलुकमा ल्याए।
खेल वस्तु र सजावट
सानो, सपाट र आयताकार ब्लक, डोमिनोजहरू विभिन्न सामग्रीहरू जस्तै काठ, हड्डी, ढु stone्गा, वा प्लास्टिकबाट बनाउन सकिन्छ।
अधिक विलासी संस्करणहरू, खेल प्रेमीहरू र स collect्कलनकर्ताहरू द्वारा कमिसन गरिएको, संगमरमर, ग्रेनाइट र साबुनको ढु .्गाले बनेको छ।
यी परिष्कृत नमूनाहरू प्राय: निजीकृत बक्सहरूमा प्याक गरिन्छ, सामान्यत: मखमलको बनाइन्छ, र सही सजावटी तत्त्वहरूको रूपमा प्रदर्शित हुन्छन्।
कार्डहरू खेल्दा जस्तै, जसमा ती भेरियन्टहरू हुन्, डोमिनोजले पहिचान मार्क एक तर्फ लिन्छ र अर्को तर्फ खाली।
प्रत्येक टुक्राको पहिचानसहित अनुहार लाईन वा माथि दुई वर्गमा विभाजन गरिन्छ, जसमा प्रत्येक थोप्लाहरूको श्रृंखलाको रूपमा चिह्नित हुन्छ, डाटामा प्रयोग गरेको जस्तै, केही वर्गहरू छोड्छ। सेतोमा।
खेलको यूरोपीय संस्करणमा, त्यहाँ चीनियाँ भन्दा सात वटा टुक्रा छन्, कुल २ 28 टुक्रा।
जबकि हाम्रो मानक डोमिनोजमा ढु the्गा with-6 छ🂓, कहिलेकाँही larger-9 (pieces9टुक्रा) सम्म र १२-१२ (pieces १ टुक्रा) सम्मका ठूला सेटहरू प्रयोग गरिन्छ।
उत्तर अमेरिकाको इनुइटले १om148 टुक्राहरू भएको सेटको प्रयोग गरेर डोमिनोजको संस्करण खेल्दछ।
चीनमा, जहाँ खेलको सृजनात्मकताको अन्त छैन जस्तो देखिन्छ डोमिनोजले पनि यस्तै तर बढी जटिल खेलको लागि आधार र मोडेलको रूपमा काम गर्‍यो: mahjong .
डोमिनोजका फाइदाहरू र बेफाइदा के हुन्?
कुनै पनि खेलसँग यसका फाइदाहरू र नोक्सानहरू हुन्छन्, पुरानो पनि डोमिनोजस्तै। यसका फाइदाहरू खेलको समृद्धि र यसको बेफाइदाहरू विशिष्टताका वरपर छन्।
फाइदाहरूसँगै सुरू गर्दै, ती मध्ये एउटा यो हो कि यो सबै उमेरहरूको लागि खेल हो, किनकि यसलाई सजिलैसँग बुझ्न, भेला गर्न र ह्यान्डल गर्न सजिलो छ, र अझै ठूलो संख्यामा रणनीतिहरूको साथ जो लामो समय सम्म खेल्नेहरूलाई खुशी पार्दछ।
यो विशाल उमेर समूह भित्र धेरै संज्ञानात्मक फाइदाहरू छन्, जस्तै कान्छोका लागि तार्किक-गणितीय विकासको उत्तेजना, वयस्कहरूको लागि रणनीतिक तर्क र बुजुर्गहरूको लागि स्मृति।
अन्तमा, यो एक व्यावहारिक खेल हो। एक सीधा सतह र कम्तिमा दुई खेलाडी संग, यो खेल शुरू गर्न को लागी पर्याप्त हुनेछ।
तर यति धेरै फाइदाहरूको साथ पनि खेलमा केही साना चीजहरू छन् जो रिसाउँदछन्। यो तथ्यबाट सुरू गर्दै त्यहाँ केवल चार खेलाडीहरू छन्कमसेकम प्रायः खेलकुदमा। उदाहरणका लागि ठूलो समूहको मनोरन्जन गर्न गाह्रो छ।
अर्को कमजोरी हो खेल सेट अप गर्न "मामी"धेरै बोर्ड गेमहरू वा बोर्ड गेमहरू जस्तै। यस टुक्राहरू कुनै पनि प्रकारको निर्धारण बिना भेला हुन्छन्। यो टेबुलमा अचानक क्र्यास हो र यो हो।
टुक्रावास्तवमा, तिनीहरू आफैंमा एक कमजोरी हो, कम्तिमा तिनीहरू हराए पछि, किनभने तिनीहरू सानो हुन्छन्, वा तिनीहरू थकित हुन्छन्, आफ्नो दृश्यता वा उनीहरूको मान गुमाउँछन्, पोइन्टको अर्थमा।
सजिलो असेंब्ली र ह्यान्डलिंग
हराएको र / वा लगाइएको भागहरू
सबै भन्दा लोकप्रिय अनलाइन घोटालाहरू